Mila midinika amin'ny vady aman-janaka izay misy fiatraikany amin'ny tokan-trano ny fananganana na fitantanana orinasa.
1- Inona izany orinasa izany?
Toy ny olombelona ihany izy io, teraka ary zaza mena, misy ny niteraka azy, misy rasazy nampiteraka, misy soram-piankohonana na acte de naissance, manana kara-panondro, manao fanisana na statistique, mandeha mianatra, mihalehibe, manambady, mety misaraka, faly, mitomany, miteraka, manana zanaka maro, manana zafi-kely, manana trosa, na manome trosa, mety marary, eny mety maty, ka omena acte de décès.
Mandoa hetra toy ny olona izy, azo toriana any amin'ny Tribonaly, afaka mitory ihany koa, mety ho voasazy, eny mety migadra, hidirantsika io farany io avy eo.
Ny Société na orinasa izany dia antsoina hoe "Personne morale", na olona ara-moraly, tsy azo tsapain-tanana, fa misy.
Isika olombelona manana vatana sy nofo no antsoina hoe "Personne physique".
Izany hoe raha manana eritreritra hanangana orinasa izany isika, Personne physique io, dia manao ny antonta-taratasy rehetra mba hiteraka "Personne morale", ka isika Personne physique no ray aman-dreny niteraka ary tompon'antoka tanteraka amin'io zaza nateratsika io, na eo anatrehan'ny fiaraha-monina, na eo amin'ny Fanjakana, na eo anatrehan'ny hetra.
Manao maloto io orinasantsika io, ohatra manary déchet industriel anaty tatatra, dia azon'ny olona toriana, ka dia isika Personne physique na ny olona anankinantsika ny orinasa, na gérant, na directeur no mijoro manoloana ny Tribonaly, raha misy lamandy aloa, dia ny orinasa no mandoa azy, raha mahafaty olona kosa ka voarohirohy ny orinasa, dia migadra ny Personne physique, eny mety akatona (vonoina) ny orinasa, dia omena acte de décès, ka tapitra ny momba azy, jerena iza no mandova azy.
2- Ny heloky ny zanaka, tsy heloky ny ray
Fiteny hatrany io, izany hoe raha misy tsy mety ataon'ny orinasa, dia adidiny izay fa tsy idiran'ny tompon'ny orinasa. Marina amin'ny ampahany io.
Nisy orinasa malaza be tsy nandoa hetram-panjakana, ananan'ny fanjakana vola be mihitsy aza, nefa tsy azo enjehina ny tompon'ny orinasa, satria izy, amin'ny maha Personne physique azy, dia ara-dalàna eo imason'ny fanjakana ny hetra naloany, fa ny orinasa zay azy no tsy nandoa. Voaharo izy amin'izay satria misy karazany maro ny orianasa na ny Société.
3- Inona izany Renivola na Capital
(Aza afangaro amin'ny Capitale - misy "e", renivohitry ny firenena iray).
Rehefa bevoka ny vehivavy iray ka hiteraka, dia mikenokenona ny rehetra, mitady izay atao anarany, mijery ny lamba anaovany 3 volana voalohan'ilay zaza, mividy berceau sy fandriana kely, manangom-bola kely fa tsy hay sao ho saro-piterahana,...
Toy izay koa rehefa ho teraka ny Personne morale, fantarina iza no atao anarany, mba mifanentana amin'ilay zaza koa fa tsy anarana mavesatra. Misy ny mikendry hoe ny annuaire dia mandeha par ordre alphabétique, ka asiany AAA ny fiandohan'ny société, misy manao hoe AZ.
Tsy mandehandeha ho azy ireny, ka raha anao anarana société dia hialao ny anarana sarotra, "Andriatsimaniriharifetra" satria hoe io ny anaran'ny dadabe ho fanomezam-boninahitra azy, nefa ny client kendrenao Sinoa. Fanina ny client sy ny fournisseur, na hiantso ilay zaza manahirana.
Mila vola iaingana izany ny manangana orinasa, petrabola voalohany hiatrehana ny fananganana ilay orinasa, ny hofatrano 3 volana voalohany, satria mety mbola tsy hisy client firy, ny andoavana karaman'ny mpiasa voalohany, ny caution hofatrano, ny location machine heritaona aloa tolobotsotra vao miainga...
Io izany no antsoina hoe Capital, na fond iaingana hoy isika. Mety tsy ho lelavola hatrany izy io, fa mety ny ordi sy latabatra efa misy ao an-trano no ampiadiana, dia iny no tombanana, dia iny no Capital.
4- Inona no mahazava-dehibe ny Renivola na Capital
Hipetraka amin'ny faktira tsika hatrany io Capital io, ka io no hitarafan'ny client sy ny fournisseur na ny banky ny orinasanao. Petra-bola tsy ho hanina manko io Capital io, fa antoka sy hijerena ny tanjakan'ny orinasa.
Raha orinasa manana capital 10 millions ariary ohatra, nefa nahita marché fanamboaran-dalana izay mitentina 1 miliara ariary, nefa tsy hanam-bola io orinasa io hiatrehana ilay marché, dia andondona any amin'ny banque, hivarotra ilay contrat marché 1 miliara ariary, dia ny zavatra jeren'ny banky voalohany dia io Capital n'ny orinasa io? Ahaverina ny volany ve ny vovok'ain'ny orinasa raha sendra kofona ilay bizina atao? Mazava ho azy fa tsy atoky ny orinasa kely antoka izy.
Andoavan-ketra amin'ny fanjakana io Capital io eo ampiandohana, ka matetika, tsy ampy vola andoavan-ketra ny mpanangana orinasa dia manao Capital ambany, mila lanjalanjaina eo izany ny mety sy ny tsy mety fa vidiana lafo izay fitsitsiana izay amin'ny ho avy.
Io Capital io koa no hijeren'ny commissaire aux comptes, na ireny mpanamarina ny fitantananam-bola ireny, raha maty antoka ny orinasa na tsia, izany hoe, raha midina ambanin'io Capital io ny fofonain'ny orinasa, dia manapa-kevitra ny Tribunal de commerce, raha misy fournisseur tsy voaloanao vola ka mangataka ny anakatonana ny orinasanao (vonoina), satria ny orinasanao dia marary tsy azo tsaboina intsony, ka mety mitarika aretina amin'ny hafa, dia atao euthanasie.
Omen'ny fournisseur nao entana betsaka ianao, fa afaka 30j no andoavana azy, ny fournisseur nao nefa tsy voaloanao vola, mazava ho azy, fa mety tsy afaka andoa karaman'ny mpiasany koa izy, nefa izy koa manana fournisseur hafa nakany iny entana nomeny anao iny, dia miampita miampita ny fahoriana nateraky ny fatiantoka nisy taminao, nefa ny tahirim-bola Capital nao tsy nahasehaka ilay lavaka, dia tapahana aingana izay fisarihanao ny rehetra any an-davaka izay.
Aleo mahita ny orinasanao maty, miaraka amin'ny fandroahana mpiasa vitsivitsy, toy izay hanao randratarihana animba ny orinasa maro hafa.
Mety misy fanavotana ataon'ny Tribonaly anao aloha eo, redressement judiciaire, ka atsahatry ny Tribonaly daholo aloha ny fitakiana trosa aminao, mandram-pahazoanao hery, mety heritaona, na avaozina isan-telovolana.
Raha tena tsy avotra intsony dia miditra ny antsoina hoe "Déclaration en faillite pour insuffisance d'actif", izany hoe tsy ampy intsony ny Capital sy ny anto-bola rehetra mihoatra amin'ny fandaniana. Banky ropitra hoy isika.
Voasoratra any amin'ny Bulletin N°1 sy N°2 io, ka mety tsy mahazo mitantana orinasa intsony, na azon'ny banky jerena io Bulletin io any amin'ny Tribonaly, dia tsy ampidram-bola anao izy raha maloto io Bulletin N°2 io.
Izay ilay teny malagasy hoe, tsy hoanina ny Renivola, fa ny zana-bola no anjaranao, izany hoe ny tombom-barotra no ho anina, fa tsy hanao vendredi magnifique amin'ny Renivola nampiasaina.
5- Iza no miantoka an'io Renivola io?
Ireo olona rehetra, na ianao tokana no mitondra io Renivola na Capital io.
Ka zaraina ho "action" izy io, dia miankina amin'ny isan'ny action entin'ny tsirairay no andraikiny ao anatin'ny orinasa, miankina amin'izay koa ny tombom-barotra omena azy.
Ohatra: 10 millions ariary ny Capital (efa ao anatiny ny tombana raha matériel no nentina, na lelavola)
Tsy misy tsara noho ny mifanaraka raha olona maromaro no hitambatra amorona orinasa, misy indray kosa no maka expert mihitsy manao évaluation na tombambidin'ny entana entiny, ohatra fiara ny azy no entiny, na machine tour.
Tombanana ho 1 million ariary ohatra ny "Action" iray, iny izay anaovana azy arakaraky ny "Actionnaire", izany hoe tompon'ny action ny antsoina hoe Actionnaire, izany hoe Actionnaire na société iray ianao rehefa manana "Action" iray, izany hoe 1 million ariary eto ny vidin'ny "Action" iray.
Misy "Action" 10 izany eto ny orinasa.
Raha olon-droa ianareo, dia mety nifampizara hoe, ny iray manana action 4 (izany hoe nitondra lelavola na fitaovana na izy roa, mitentina 4 x 1 million ariary), ary ny ankilany kosa dia manana action 6 (nitondra 6 tapitrisa ariary).
Mipetraka eto ny antsoina hoe "Bons comptes, bons amis".
Ianao nitondra 4 actions, dia mifanentana amin'izay koa ny andraikitrao, na amin'ny tsara (tombom-barotra), na amin'ny ratsy (fatiantoka, na gadra, na sazy personne physique), ilay nametra-bola 6 actions kosa dia ahazo ny tandrify azy koa.
Ka na ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny zaza, na ilay société izany, dia ny manana action maro no manapa-kevitra.
Arakaraky ny statut io zany, na ny Lalampanorenan'ny société, izay tsy maintsy apetraka eo anivonan'ny fanjakana, dia raha maromaro ny actionnaire, dia afaka mitambatambatra amin'ny ady hevitra sy fanapahan-kevitra, ny isan'ny action izany no miresaka fa tsy ny isan'ny olona. Tsy misy démocratie izany ny fitantanana orian'asa fa resaka intérêt. Firy no nentiko, firy ny anjarako. Ny ankoatr'izay any an-tokotany.
Tadidio, fa ny contrat de mariage, na ny statut izay mampifanambady actionnaire maromaro, dia natao hitsinjovana raha misy ady sy fisarahana.
Ny contrat de mariage n'ny mpivady dia en vue d'une divorce, ho an'iza ny frigo, ny fandriana, ny trano, atao ahoana ny zaza, iza no mandova...
Tsy manao mariage satria mifankatia, fa manao mariage sao hisaraka, ka iny contrat nosoniavina iny no mamaritra ny fomba fisarahana sy ny fizarana ny zaza sy ny fananana.
6- Inona ireo karazana orinasa
Maromaro izy ireo fa amin'ny manaraka hiverenantsika lalindalina;
a- Société individuelle
Olon-tokana ihany no ao anatiny, ary tsy miavaka ny Personne morale sy ny Personne physique, na ny fananany aza dia mitambatra.
Betsaka ny manao an'io satria io no tsotra indrindra, tsy misy taratasy betsaka atao, fa avy dia patente fotsiny dia vita.
Ohatra: Mpivarotra, mpanao taxibe, mpanao saisie, ireny miasa manao prestataire ireny.
Tsy mila Capital eo izany, izay eo an-tanana no ampiadiana.
Amorain'ny fanjakana ny hetra sy ny fitantanana ny orinasa sy ny fandoavana ny TVA, tonga dia forfaitaire hatrany no alainy, na mahita tombony ianao na tsia dia iny tsy miova no vola aloanao isan-taona.
Lafiratsiny, raha sendra dobon'ny trosa ny société nao, satria société personne morale io, izay mifangaro amin'ny fanananao, izany hoe tsy manana compte amin'ny banky mitokana io fa izay fanananao dia azy, izay azy dia anao, ka raha tonga ny huissier na vaditanin'ny fournisseur hitaky ny volany, dia ny télé écran plat ao an-tranonao no bedainy, ny fiara entin'ny vadinao no giaziny.
Tsy afa-mamaly eo ramatoa raha ny salon sy ny brushing no alainy, indrindra raha tsy nanao contrat de mariage tany amboalohany raha vao nifanambady ianareo roa hoe misara-pananana. Fa raha nanambady sondriana je t'aime mon amour, izay anao dia ahy, dia rehefa mitranga izay, dia lasan'ny huissier avokoa ny anareo rehetra.
Mazava ho azy, raha misy mitory ny orinasa, ohatra mécanicien ianao, namboarina tao aminao ny fiara, nefa voan'ny accident ary maty ny mpamily, dia nitory ny fianakaviana fa tsy nisery tsara ny bilao, dia ianao no migadra avy hatrany.
b- Société à responsabilité limitée na ilay hoe SARL
Amin'ny maha "à responsabilité limitée" azy izay, dia tsy maintsy misy olona roa farafahakeliny eto ny actionnaire, ka limitée amin'ny apport, na ny action noentiny ny andraikitry ny tsirairay. Ny actionnaire majoritaire izany eo no mihinana raha misy mahazo ny société, fa ny perte dia limitée amin'ny apport nentina.
Ka raha misy ny fantiantoka, dia kely kokoa ny fantiantok'ilay nitondra kely, fa raha misy tombony kosa, dia mahazo tombony kokoa ilay ni risque nitondra petrabola betsaka. Izay mahasahy maty mifono lambamena hoy ny ohabolana.
Eto izany dia mahaleo tena, ary misaraka amin'ny fananan'ny actionnaire ny fananan'ny Entreprise.
Tandremo izany fa ny fiaran'ny Société tsy fiaranao actionnaire ka entinao lundi de fête des pères. Azo enjehina manodikodina ny fananan'olona ianao, satria Personne morale hafa no tompon'io. Izay ilay antsoina hoe "Abus des biens sociaux", izany hoe nampiasainao tsy amin'ny asan'ny société ny ordin'ny Société fa anaovanao Facebook, sy imprimer nao photo des vacances, nefa tsy misy idiran'ny vitsika amin'ny pétrole.
Manana compte en banque mitokana izy, ary raha misy ny mahadobo ny orinasa, dia tsy mahazo mikasika ny fananan'ny actionnaire ny mpitaky trosa, fa mety hitsongolika ny détournement des biens sociaux izy hoe, latabatra tao amin'ny orinasa no navoakanao antsokosoko, rehefa hitanao fa hiletika ny sambo. Mpangalatra zavatr'olona ianao eo, fa tsy hoe ahy ny société ka izay tiako atao aminy.
Matetika ny banky raha mindrana vola aminy ny société, dia angatahany koa ianao Personne physique anao caution personnelle amin'ny vola ampindraminy, ankoatran'ny antoka efa takiany amin'ny société.
Ka raha dobo ny sambo, dia ny entanao any an-trano no alainy. Raha tsy mety hanao caution personnelle ianao hiarovanao ny fanananao, dia hilaza izy hoe, na ianao aza tsy matoky fa ahatafaverina ny vola, ka ahoana izaho banky no atoky ny bizina tianao atao.
Misy ny manao contrat de mariage séparé, ka soratana amin'ny vady ny fananana rehetra, dia raha sendra dobo ny orinasa dia tsy voakasika ireo fananana, fa tandremana, satria mety hisara-bady koa ny Personne physique, indrindra rehefa tsy mandeha ny orinasa, dia lasan'ilay vady avokoa ny fananana, dia hianjaka eo ianao sy ny orinasa miala aina, dobo trosa.
d- EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée)
Mitovy tsy misy hafa amin'ny SARL eto ny EURL, fa ny mahasamihafa azy, dia actionnaire tokana ny EURL, fa ny SARL tsy maintsy olona, na Personne physique 2 farafahakeliny.
Mahatsara an'izay, dia tsy misy olon-kafa hifamaly aminao fa izay rehetra tianao atao amin'ny orinasanao no ataonao.
Hidirantsika manaraka ny société SA, ny SAS, SCI...
Mety tekinika kely, misy vola azon'ny actionnaire atao Renivola na Capital, iny izany mihitsoka ao anaty orinasa, tsy azo alaina intsony, raha tsy hoe namidy amin'olon-kafa ny action. Ny Statut na ny fifampifehezanareo samy actionnaire anefa tsara mazava, satria araka ny nolazaiko, on fait un contrat de mariage pour une éventuelle séparation, manao fifanarahana mitsinjo ny mety fisarahana. Misy ny tsy mamela ny hivarotra ny action amin'olon-kafa raha mbola misy actionnaire afaka mividy ilay action aloha, ialana amin'ny olona vahiny tanteraka amin'ny orinasa hiditra anaty orinasa.
Tezitra fa mifamaly, tsy tian'ilay manana action 4 hatrany ny fanapahan-kevitr'ilay manana action 6, dia avereno ny volako, fa za tsy mahavita intsony. Tsy afaka atao izay, amidiko amin'olon-kafa ny part social, na ny action ko, fa tsy maintsy jerena ny statut momba izay fifanolanana izay. Mety miafara eny amin'ny Tribonaly mihitsy raha lehibe ny petrabola.
Mety misy kosa vola ampindramin'ny actionnaire, hampandehanana ny asa, izay mety akany zana-bola, io ilay antsoina hoe "compte courant" actionnaire. Tsy Capital io fa raisina toy ny hoe mampindram-bola averina ny Actionnaire iray.
Tsy miditra amin'ny fanisana ny fizarana ny tombom-barotra izany izay, fa manana ny zana-bola nifanarahana tamin'ny fotoana nanomezana azy.
Na hoe teo ampandoavana ny karaman'ny mpiasa, dia tsy ampy ny vola, faute de trésorerie, izany hoe ireo client tokony adoa vola tsy mbola nandoa, dia tsy ampy ny an-tanana, fa tsy hoe matiantoka akory ny orinasa, dia ny vola tany an-tranonao no nalaina, na nindram-bola tamin'ny karaman'ny vadinao andoavana karaman'ny mpiasa. Dia atao anatin'ny compte courant gérant izay, dia averina arakaraky ny fananana vola an-tanana, mety misy zana-bola iny.
Mahaiza misafidy hatreny ampiandohana ny karazana société mety amin'ny asanao, aza adino koa hoy aho fa zaza miahalehibe izy io, ka raha société individuelle kely no niaingana, dia miakatra EURL, izany hoe mitokana ny fanananao sy ny an'ny société, ny mpiasa tsy mpiasanao intsony fa an'ny société, mahita namana mitondra petra-bola bebe kokoa dia lasa SARL, ary hiakatra Société Anonyme na SA, izay maha anonyme azy, tsy ambaratelo ireo actionnaire ao anatiny.
Farany, ny zaza vao teraka dia mihalehibe, rehefa tonga amin'ny fahatanorany izy, matanjaka izy eo, iny no manambady dia miteraka hafa, dia mitoetra mifandimby ny anarana, fa aza miandry efa antitra efa mitsoririka ho faty vao hiteraka.
Ny tiana ambara, ny société ao anatin'ny heriny, no miteraka société, zanaka, hafa fa tsy efa sahirana marary, vao mikoropaka anao investissement anokatra société hafa fa ho dobo ity iray ity.
(Aza adino ary fa teraka rahampitso aho an hihii 20 juin 1965- 54 taona, 30 taona nitantanako Société, manam-bady, ary 3 ny zanako 2 lahy, 1 vavy, ary 2 ny zafikeliko, 1 lahy, 1 vavy)